3-6-2012 ရက်နေ့တောင်ကုတ်မြို့တွင် အပြစ်မဲ့ မြန်မာခရီးသည် ၁၀ ဦး ပစ္စည်းယူပြီးရက်စက်စွာအသတ်ခံရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Members » 3-6-2012 ရက်နေ့တောင်ကုတ်မြို့တွင် အပြစ်မဲ့ မြန်မာခရီးသည် ၁၀ ဦး ပစ္စည်းယူပြီးရက်စက်စွာအသတ်ခံရ
3-6-2012 ရက်နေ့တောင်ကုတ်မြို့တွင် အပြစ်မဲ့ မြန်မာခရီးသည် ၁၀ ဦး ပစ္စည်းယူပြီးရက်စက်စွာအသတ်ခံရ
- mical chan
Posted by mical chan on Jun 6, 2012 in Members, News | 10 comments
၃-၆-၂၀၁၂ သံတွဲမြို့မှထွက်ခွာလာသည့် ရိုးမသစ္စာလေအိတ်အဝေးပြေးကားတစ်စီးပေါ်မှ အပြစ်မဲ့မြန်မာခရီးသည် ၁၀ဦးအား တောင်ကုတ်ဒေသခံ အချို့ က ၃-၆-၂၀၁၂ခုနှစ်ညနေ၄နာရီခွဲဝန်းကျင်တွင် သံတွဲ-တောင်ကုတ်လမ်းဆုံ၌ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန်ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
သံတွဲ-ရန်ကုန်ပြေးဆွဲသည့် ရိုးမသစ္စာအဝေးပြေးယာဉ်(၇ဂ/၇၈၆၃) သည်ရန်ကုန်မြို့သို့သွားမည့် ခရီးသည် ၁၅ဦးကိုတင်ဆောင်လာကာ သံတွဲမြို့ဂိတ်မှနေ့လယ် ၁နာရီတွင် စတင်ထွက်ခွာခဲ့ ရာ တောင်ကုတ် သို့ ညနေ ၄း၁၅ ၀န်းကျင်တွင် ရောက်ရှိသည်။ တောင်ကုတ်မြို့တွင် ခရီးသည် အတင်အချလုပ်ပြီး ရန်ကုန်သို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာလာရာေ တာင်ကုတ် မြို့ထွက်ဦးကျောက်တောင်၏နေလသစ္စာမောင်းတံဂိတ်နှင့် လ-၀-ကဂိတ်တွင် ဆိုင်ကယ်အစီး၁၅၀ ၀န်းကျင်အင်အားသည် လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များရှိလျှက် အတင်းအားဓမကားအားတောင်ကုတ်မြို့တွင်းသို့ပြန်လည်ေ မာင်းနှင်စေခဲ့ပြီးတောင်ကုတ်မြို့လည်ကောင်တွင်အသင့်
သား(၆)ဦးနှင့်ေ့မြာင်းမြမြို့သား(၂)ဦးနှင့် သံတွဲမြို့သား(၂)ဦးထံမှ ဟန်းဖုန်း(၆)လုံး ရွှေ ၆ ကျပ်သားနှင့်ငွေကျပ်သိန်း ၆၀ ခန့်နှင့်တန်ဘိုးရှိပစ္စည်းများအား ယူဆောင်ကာ
ကားပေါ်မှလမ်းမသို့ဆွဲချပြီးရက်စက်စွာဖြင့်ဒုတ်များ၊ ဒါးများဖြင့် မသေမချင်းဝိုင်းဝန်းထိုးခုတ်ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်ကြပြီး ၄င်းတို့အလောင်းများအားဝိုင်းဝန်သေးပန်းကြပြီး ၀က်ဆီများလောင်းချကာမြို့လည်လမ်းဆုံလမ်းမကြီးပေါ်တွင်စုပုံထားကာ ကားကိုလည်းတစဆီဖျက်ဆီးမှုကိုရက်စက်ယုတ်မာစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
မှဟန့်တားခြင်းမပြုလုပ်ခဲ့ပေ ၊တောင်ကုတ်တပ်မဌနာချုပ်၏အနီးတွင်ဖြစ်ပွါးနေသောလည်း မည်သို့မှတပ်မှကူညီမှုမပြုလုပ်ခဲ့ပါ၊ တပ်မှုကငါတိုနဲ့မဆိုင်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်
ဟုသိရှိရပါသည်။ေ သဆုံးသူ များမှာ- တောင်တွင်းကြီးမှ ဦးနီပွေး၊ ဦးမောင်နီ၊ ဦးအေးလွင်၊ ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးတေဇာမြင့်၊ ဦးတင်မောင်ထွေး၊ မြောင်းမြမြို့မှ ဦးအောင်ဘိုဘိုကျော်၊ ဦးဇော်ညီညီထွဋ်၊ သံတွဲမြို့မှ ကိုအောင်စိုးဝင်း (ခ) ကိုမောင်မောင် (ယာဉ်ငွေသိမ်း)နှင့် ဦးညီညီထွန်းတို့ဖြစ်ကြသည်။
သေဆုံးသူများအနက်မှ တေဇာမြင့်(၂၈နှစ်)မှာ အိမ်ထောင်ကျခါစ လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အမျိုးသမီးမှာ ကိုယ်ဝန် ၃ လဖြင့် ကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
တောင်ကုတ်မြို့တွင် အသတ်ခံရသည့် အပြစ်မဲ့မြန်မာနိုငံသား၁၀ ဦးအမည်စာရင်း
စဉ် အမည် အသက် အဘအမည် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်အမှတ် နေရပ်
၁ ဦးနီပွေး ၅၈ ဦးအာမက်ဆူဘန်၏ ၈/တတက(နိုင်)၀၉၅၅၄၈ တောင်တွင်းကြီး
၂ ဦးမောင်နီ ၆၅ ဦးကေပီဆူဖီ ၈/တတက(နိုင်)၀၉၅၅၃၀ တောင်တွင်းကြီး
၃ ဦးအေးလွင် ၅၂ ဦးအဖိုးကြီး ၈/တကက(နိုင်)၀၉၃၅၇၃ တောင်တွင်းကြီး
၄ ဦးအောင်မြင့် ၅၀ ဦးလှမောင် ၈/တကက(နိုင်)၀၉၄၅၅၇ တောင်တွင်းကြီး
၅ ဦးတေဇာမြင့်(ခ)ဘီလာလ် ၂၈ ဦးရာကွတ် ၈/တကက(နိုင်)၁၈၉၈၁၅ တောင်တွင်းကြီး
၆ ဦးတင်မောင်ထွေး ၂၁ ဦးတင်ဦး ၈/တကက(နိုင်)၂၁-၀၀၄ တောင်တွင်းကြီး
၇ ဦးအောင်ဘိုဘိုကျော် ၂၆ ဦးထွန်းထွန်းဇော် ၁၄/မမန(နိုင်)၂၇၇၆၉၅ မြောင်းမြ
၈ ဦးဇော်ညီညီထွဋ် ၃၃ ဦးအီဘရာဟင် ၁၄/မမန(နိုင်)၁၄၈၁၃၃ မြောင်းမြ
၉ ဦးအောင်ဇော်ဝင်း(ခ) ကိုမောင်မောင် ၄၅ ဦးသိန်းအောင် ၁၁/သတန(နိုင်)၀၀၂၇၇၃- သံတွဲ
၁၀ ဦးညီညီထွန်း ၄၂ ဦးအောင်ထွန်း ၁၁/သတန(နိုင်)၀၀၁၆၇၉ သံတွဲ
Admin Note: လူမျိုးရေး..ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အသုံးအနှုံးတွေဖယ်ပြီး.. သတင်းရေးဟန်နဲ့ပြန်ပြင်ရေးပေးထားပါတယ်..။
လောလောဆယ်အခြေအနေအရ (လူမျိုးရေး..ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အသုံးအနှုံး)ထည့်ပြီး လှုံ့ဆော် ရေးတဲ့သတင်းမျိုး တင်ခွင့်မပေးသေးပါ။
About mical chan
mical chan has written2post in this Website..
View all posts by mical chan →
ငါတခုလောက် ကြုံလို့မေးဘာရစေ.. ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒမှာ အရာရာတိုင်း ဖြစ်ရပ်တိုင်းကို ဘုရားသခင် အလိုတော်လို့ သတ်မှတ်တယ်။ ခရစ်ယာန်မှာဆိုလည်း လူဆိုတာ အပြစ်ရှိထားသူလို့ သတ်မှတ်တယ်။ ဘုရားသာလျင် အဲဒီအပြစ်ကို ဖြေပေးနိုင်တယ်ပေါ့ကွာ။ မူစလင်ဘာသာမှာလည်း အဲဒီသဘောပါဘဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်း အတိတ်ကံကြောင့် အရင်ဘဝတခုမှာ သူများကို လုပ်ခဲ့လို့ ပြန်ခံရတာဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ရှိတယ်။ ဒါတွေက ဘာသာရေးအပိုင်းပေါ့ကွာ။ လောကီလူ့လောကမှာတော့ အဲလိုလုပ်လို့မရဘူး။ မှားရင် ဥပဒေ ဘာညာနဲ့ ဆော်ရတာပဲ။ မှန်တဲ့သူတွေတောင် အဆော်ခံရသေးတာ..။ ဒီတော့ ဘာသာရေးအရ မင်းတို့မွတ်စလင်တွေ လူသတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကို ခွင့်လွှတ်နိုင်သလား၊ သဘောက ကောင်းကင်ဘုံ ငရဲ ကိစ္စ ဘုရားသခင် ကြည့်လုပ်လိမ့်မယ်။ မင်းတို့က လူသားအနေနဲ့ တရားဥပဒေအောက်ကနေ ဖြေရှင်းဖို့… အဲလိုမျိုး အတွေးပေါ်ဖူးလား။ မွတ်စလင်မှ မဟုတ်ဘူး ဖန်ဆင်းရှင်အယူ လက်ခံသူတိုင်း၊ ကံကံ၏အကျိုး ယုံကြည်သူတိုင်းကိုလည်း အလားတူမေးဂျင်ဒယ်။
ကံကံ၏အကျိုး ယုံကြည်သူတိုင်းကိုလည်း အလားတူမေးဂျင်ဒယ်။
အဲဒီမေးခွန်းကို စိတ်ထဲက..တကယ်မေးတယ်ဆိုရင်.. အဖြေက..
naylin oo says:
ဗုဒ္ဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ကော ……………….?မေကြည့်တာနော်စိတ်မဆိုးနဲ့ ဆော်ရီး
စောင့်ဆိုင်းနေသောလူအင်အား(၄၀၀)ခန့်သည်ကားပေါ်မှလိုက်ပါလာသောသံတွဲမြိုမှပြန်လာသောေ တာင်တွင်းကြီးမြို့သား(၆)ဦးနှင့်ေ့မြာင်းမြမြို့သား(၂)ဦးနှင့် သံတွဲမြို့သား(၂)ဦးထံမှ ဟန်းဖုန်း(၆)လုံး ရွှေ ၆ ကျပ်သားနှင့်ငွေကျပ်သိန်း ၆၀ ခန့်နှင့်တန်ဘိုးရှိပစ္စည်းများအား ယူဆောင်ကာ
အဲ့ဒါတွေက တိကျသွားတာလား ရှုပ်ထွေးသွားတာလား
ပါကစ္စတန်နွယ်ဖွား၊ ဘင်္ဂလားနွယ်ဖွား ခရီးသွား ၁၀ဦးမဟုတ်ဘူးလား။
ကိုကြောင်ကြီး မှတ်ချက်ကတော့ ရှင်းတယ်။ ကြိုက်တယ်။
အနွယ်ဖွားဆိုရင်တောင် မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ. စပ်ထားတာပဲ မြန်မာနိင်ငံမှာ ဟိုအရင်ကတည်း နေလာခဲ့ကြတာပဲ ကဘာကြီးက ရွာတစ်ရွာဖြစ်နေချိန်မှာ ယူကဘာကို စိုးရိမ်နေတာလဲ
(၂)ပို့ စ်တင်သူဟာ အရင်အကောင့်ဖြစ်တဲ့
adular/Tun Tun ဖြစ်နေနိုင်တာရယ်လေးပါ။
လူမျိုးရေး ပြဿနာ “ကိုလင်းဝေ ပို့ စ်မှာ ကွန်မန့် တော့ ပေးသွားပြီး ကိုယ့်ပို့ စ်မှာ
မင်းတို့တုန်းက လဲ အပြစ်မဲ့ ဆွမ်းစားကြွ တဲ့ ဘုန်းကြီးကိုကျတော့ ဘာဆိုင်လို့ညှင်းဆဲ သတ် ရေ မျှောရသလဲ၊
မင်း ဘာ လှူံ့ဆော်ချင် လို့ ဒီ ပို့စ် ကို တင်သလဲ၊
အပိုဆာသား တွေ တော်တော် ထည့်ရမှာပဲနော်။
အလာ စိမံတာလေ မင်းကဘာအထွန့်တက်နေတာလဲ?